अर्थमन्त्री खतिवडा भन्छन्– व्यवसायिक खेतीबाट मात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर – Krisi Kranti
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सहकारीमार्फत सामूहिकरुपमा व्यवसायिक खेती गरेमा कृषिमा छिट्टै आत्मनिर्भर हुन सकिने बताएका छन् । कृषि उत्पादनमा आत्मननिर्भर हुनुका साथै निर्यातसमेत गर्न सकिने उनले दावी गरे ।
साना किसान विकास लघुवित्त वित्तिय संस्था लि., नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सहकारी संघ लि. को आयोजनामा भएको साना किसान सम्मेलनका अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले उन्नत बिउजिबज, प्रविधि र यान्त्रिकरणका लागि सहकारी खेती अत्यावश्यक भएको बताएका हुन् । सहकारीमार्फत व्यवसायिक ढंगले उत्पादन गर्न सके केही वर्षभित्रै कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिने बताए । सधैं साना किसान भएर मात्र नहुने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषिका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
लागत घटाउन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले अनुदान दिने गरेपनि वास्तविक किसानले अनुदान पाउन नसकेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । कृषि उत्पादनमा किन लागत बढी भयो भन्ने कुरामा खोजबिन गर्न आवश्यक छ– उनले भने । दाना महंगो पर्ने भएकाले घाँसमा आधारित गाईवस्तु पाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रदेश नं. ३ का सांसद पशुपति चौलागाईले कृषिबाटै आर्थिक संमृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए । कृषिमा आश्रीत प्रतिशत र संख्या घटाएर कृषि उत्पादकत्व बढाउने योजना बन्न आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । कृषिको रुपान्तरणका लागि प्रदेश सरकारले कुन विधिबाट जान सकिन्छ भनेर योजना बनाइरहेको उनले बताए ।
२० वर्षे कृषि रणनीतिका कारण कृषिमा धराशायी भएको उनको भनाइ थियो । अहिलेको विधिबाट परिवर्तन सम्भव छैन ः उनले भने– नयाँ तरिकाबाट कृषिको आधुनिकरण गर्नुपर्छ ।
कृषिमा ऋण पाउन र बिमामा समेत समस्या भएका कारण कृषि फस्टाउन नसकेको उनले बताए । उत्पादन, बजारीकरण र प्रशोधनमा सहकारीले रचनात्मक काम गर्न सक्ने उनले बताए । तर सरकारले उत्पादनमा जान स्पष्ट बाटो देखाउनुपर्ने उनले बताए ।
साना किसान विकास लघुविक्त वित्तिय संस्था लि. र नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले बजार व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण कृषक मारमा परेको गुनासो गरे । प्राविधिक ज्ञान नहुँदा कृषक मारमा परेको भन्दै अध्यक्ष पाठकले प्रविधि सिकाउन साना किसानका सदस्यलाई इजरायल पठाउने गरिएको जानकारी दिए ।